Top 5 Iwayini Amadolobha EYurophu Futhi Indlela Get There | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Iwayini Amadolobha EYurophu Futhi Indlela Get There
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/04/2021)
Njalo iwayini lover kweqiniso uyazi ukuthi amadolobha iwayini eYurophu ukunikela iwayini ezingabizi futhi emangalisayo. Kusukela France e-Italy, futhi eminye, kula mazwe ngokuthandana abaningi ukuba iwayini best in the world.
ngokwengxenye, lokhu kungenxa ekahle isimo sezulu ezikhulayo, kodwa namanje kuyikhono. Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi angalenza kanjani iwayini okumnandi kakhulu.
abathandi Iwayini ukwazi ukuthi kwezinye izindawo kukhona kancane kanzima ukuze afinyelele ngesitimela njengoba bebizwa ezigxilile emaphandleni. Kuyajabulisa, Western Europe has emadolobheni amaningana ukuthi usengakwazi ukukunikeza iwayini kakhulu eYurophu. plus, ngeke neze ube enkingeni wena ekutholeni indlela athole kubo, njengoba zonke lezi ngezitimela. Uma yiphuzu lakho kuyinto yimaphi amazwe enkulu eYurophu, uzoba isikhathi kulula ukuthola khona.
Azi konke lokho emqondweni, ake sibheke uhlu oyinhloko okungcono iwayini amadolobha e-Europe kanye nendlela ukubavakashela ngesitimela.
Ngeshwa akwaziwa wonke umuntu, Rhine River Valley, eJalimane ligcwele izinga izivini. Bakha iwayini best zonke eJalimane, futhi iningi labo ukufinyelela Koblenz.
Lokhu edolobheni elincane amanga emfuleni Rhine futhi linikeza ezinye zezindawo ezingcono kakhulu iwayini imigoqo kanye zokudlela esifundeni. Kuyinto enhle kakhulu, akafani nakwamanye amadolobha ezinkulu endaweni.
Ezivinini esifundeni kukhona abadumile sokubahlonipha engcono Riesling iwayini emhlabeni. Uma unquma ukuthi ufuna ukuvakashela idolobha ebabazekayo of Koblenz, kuzodingeka ukuzama ingilazi noma ezimbili zewayini abandayo mhlophe.
Ukuthola Koblenz Kulula kakhulu, njengoba enye izindawo zazo zonke Rhine Valley iwayini emadolobheni. Kuyinto maphakathi ephakathi amadolobha amabili amakhulu-German - Cologne futhi Frankfurt, futhi izitimela okusheshayo bazoya Koblenz esusela. Yini enye, edolobheni amanga owavakashela Rhine Valley ebabazekayo umzila wesitimela.
Ekupheleni, edolobheni kuqhathaniswa eduze nomngcele Netherlands, Belgium, Luxembourg, neFrance. Lokho kusho ukuthi ngeke abe nenkinga yokuthola isitimela ezivela kula mazwe kanye.
Berlin ukuze Koblenz Izitimela
Frankfurt ukuze Koblenz Izitimela
Luxembourg ukuze Koblenz Izitimela
Stuttgart ukuze Koblenz Izitimela
Vienna akuyona nje phakathi kwemizi engcono bahlala; kungcono futhi phakathi best iwayini amadolobha e-Europe. Izwe ukhiqiza eliningi ngokuvamile, iningi okuyinto kusukela izivini kanye iDanube esigodini. Vienna ngokwayo ingenye dolobha zomhlaba ambalwa ukhiqiza iwayini phakathi komuzi.
Konke lokho kusho ukuthi uzoba nethuba ukuzama iwayini engcono izwe kufanele anikele, kwesokudla e Vienna. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi ibhodlela lewayini ukujabulela kuyinto Weissburgunder.
Vienna iyinhloko-dolobha ye Austria futhi omunye emadolobheni amakhulu e-Europe, okusho uzoba ngokushesha uthole kukhona ngesitimela. Kuyinto central wesitimela ihabhu ukuthi likwazi ukuxhumana emazweni amaningana angomakhelwane.
Pick yethu esisobala Phezulu 5 emadolobheni iwayini eYurophu Bordeaux, France
Labo kini ujwayelene iwayini, ukwazi ukuthi Bordeaux eFrance ingenye iwayini capitals eyaziwa kakhulu emhlabeni. Yingakho kuba ohlwini the best iwayini amadolobha e-Europe. Zonke iwayini elenziwe kule ndawo edumile agelezela emzini kufanele kujatshulelwe.
Bordeaux iwayini yaziwa ngokuthanda amaminerali kanye izithelo amanothi zabo, kusuka kwephestri izithelo ukuze imnandi izithelo ezivuthiwe. Lezi iwayini futhi sibe nekhono amazing ubudala kahle. Abenzi ngokuvamile ngibashiye yobudala amashumi eminyaka.
Ngokwemvelo, ungenalo ukuzama iwayini elidala ukuthi imali enkulu ukuzwa iwayini engcono le ndawo. Kukhona inala iwayini okungabizi nge ezehlukile intengo-value isilinganiso. Iwayini phezulu udinga ukuzama lapha Red Bordeaux.
Ukufinyelela edolobheni ngeke kube yinkinga, kungakhathaliseki ukuthi ngabe use-Western Europe. Yini enye, iningi imigqa isitimela uya Bordeaux sipho izitimela ngesivinini. Uzodinga amahora ambalwa nje kuphela ukufika kuleli dolobha kusukela kuphi France. Isitimela esisuka Paris ifinyelela Bordeaux esikhathini esingaphansi 3 amahora!
Toulouse eBordeaux Izitimela
Florence, Italy lwethu lokugcina Iwayini Amadolobha eYurophu
Jewel Tuscany, uma kungesona sonke Italy, Florence lingumuzi ephelele nge iwayini kakhulu ezweni lonke. Kukhona amadolobha amaningi amancane umuzi ezikhiqiza elimangalisayo iwayini Sangiovese bonke olufanele ukuba uhlu iwayini amadolobha e-Europe. Lezi nemizana langa kanye emangalisa ingaphakathi Italian okunzima ukuzifinyelela, kodwa emzini Florence akuyona.
Ungakwazi ukufinyelela edolobheni ngesitimela kuphi e-Italy, noma okunye, efana Switzerland neFrance. Kukhona njalo, izitimela ngesivinini ukuthi ahambe izikhathi eziningana nsuku zonke kusuka Milan neRoma, kodwa futhi kusukela Venice. Lezi uhambo kuthathe amahora esingaphansi kwezinsuku ezimbili, futhi uthola ithuba lokubona i- amagquma amahle nezinkambu zase-Italy.
Ngakho ingabe ukulungele ukujabulela iwayini amadolobha e-Europe? SaveATrain.com kuzokusiza uthole yisiphi idolobha Europe, okusheshayo, ezishibhile, futhi emomotheka!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#umgqumeni europeantravel europetravel Tranride izitimela ithiphu yesitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly iwayini